चरित्र हत्या भयो भन्दै जुना श्रीसले मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्दै। » लोक संगीत पारखी
चरित्र हत्या भयो भन्दै जुना श्रीसले मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्दै।
१८ श्रावण २०७६, शनिबार ११:०९
हिन्दु नारी हरुको महान पर्व हरितालिका तीज नजिकै आएको छ यसै बिचमा कलाकार हरुलाई आफ्नो पस्तुती पस्तुत गर्न तछाड् मछाड् छ। गायिका जुना श्रीस को आवजमा रहेको “सिरैमा गम्छा” नामक तिज गीत केहि दिन पहिले सार्वजनिक भएको थियो ।
गीतमा शब्द हरु एक दमै मन छुने र समय सान्दर्भिक भएता पनी गीतको थम्बेलमा भने अलि कती लापरबाही नै भएको छ गीतको टाइटल एउटा र गीत थम्बेलमा “दुधको मन्टो छुदा” यस्तो राखेर गीत सार्वजनिक गरिएको छ।
एउटा चर्चित गायिको नाम बेचेर यस्तो हुन्छ भने सोच्नु होस् नयाँ आउनी पुस्ता ले के गर्लान प्रतिष्ठान ले कर भन्छ? यो बिषयमा प्रतिष्ठान ले भने अजै केही विज्ञप्ति दिएको छैन।
गायिका सर्जक भन्छन हामीलाई लाजमर्दो नै बनाय हाम्रो इज्जत मा यती ठुलो दाग लाग्यो । यस बिषयमा हामीले यो गीतको गायक रिजन थापा मगर सँग सम्पर्क गर्ने खोज्यौ तर उहाँ सँग सम्पर्क स्थापित हुन भने सकेन् । गायिका जुना श्रीषले सामाजिक सञ्चाल फेसबुक मा एउटा पोस्ट लेख्दै यस्तो भन्नु हुन्छ ।
पढ्नु होस् पुरा ।
नमस्कार म जुना श्रीस मगर गित संगितमा लागेको 14/15 बर्ष पुग्दा अहिले आएर एउटा गित होइन गितको शिर्षक ले गर्दा मलाई लज्जित बनाईराखेको छ हिजो रिलिज हुन बित्तिकै देखि मैले हटाउन को लागि बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि उनिहरु अहिले त झन मोबाईल अफ गरि सम्पर्कमा न आएकोले उनिहरुको यो हर्कत नियतबस हो भन्ने लागेर मेरो इज्जत माथी दाग लागेको कारण मनसुन कृयसन का युट्युब वाला Prakash Sapkota र सोही गितका गायक Rijan Thapa Magar विरुद्ध भोलि मेरो मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्दैछु।मलाई साथ दिनहुन सबैमा अपिल गर्दै मेरा शुभचिन्तक ज्युहरुमा पर्न गएको असर प्रती क्षमा चाहन्छु।
बिपत्तिमा एकजुट हुन ‘सिधा कुरा” टिम डाक्टर सहित बारा, पर्सा जाँदै
धुर्मुस सुन्तली ज्यू, हुम्ला/जुम्लाका शिशु बाच्न पाए त होलानी रंगशालामा खेल्न आउने ? विकटमा अस्पताल ...
गुण्डा डन सँग डराउने दिन गए अब , सरकार सँग डराउने दिन आएछ-क्याप्टेन विजय लामा
पूर्वराजाले भने-बाढी पहिरोको प्रकोपले पुर्‍याएको क्षतिले दु:खी भएको छु
लुट्या कुरा थापाउनेलाई भेट्नासाथै कुट् – केदार घिमिरे “माग्ने बुढा”
रवि लामिछानेको आक्रोशित स्ट्याटस् …